Proclaiming the Word - Nandao ny zavatra rehetra izy dia nanaraka Azy. | Outlines of Messages
Nandao ny zavatra rehetra izy dia nanaraka Azy.
Lioka 5, 1-11
Andriamanitra dia vonona ny hampianatra anao!
Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’nyfarihin’i Genesareta Jesosy ; (Lioka 5, 1 ).
Raha ohatra ka vonona ny hihaino aho dia vonona ny hampianatra ahy koa ny Tompo !
Vonona ny hampiseho ny heriny aminao ny Tompo !
Ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. Ary niditra teo amin’ny sambokely iray izay an’I Simona Izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin’ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin’I Simona: Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonao hahazoana hazandrano. Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona: kanefa noho ny teninao, da halatsako ihany ny harato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony. Ary izy nanatsiaka ny namany, izay teo amin’ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny,ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika. (Lioka 5, 2-7).
Raha vonona ny hankato an’Andriamantira aho dia vonona ny hampiseho ny heriny Izy.
Andriamanitra dia vonona ny hampiasa anao!
Ary rehefa hitan’i Simona Petera izany ,dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy izy ka nanao hoe : Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho ny ahaben’ny hazandrano izay azony. Ary toy izany koa jakoba sy Jaona, zanak’i Zebedio, izay niombon-draharaha tamin’i Simona. Dia hoy Jesosy Tamin’i Simona : Aza matahotra ; hatramin’izao ankehitriny izao dia olona kosa no ho azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an’i Jesosy. (Lioka 5, 8-11).
Raha ohatra ka vonona ny hanetry tena aho dia vonona ny hampiasa ahy Andriamanitra.
Lesona avy amin’Andriamanitra:
Raha vonona ny hihaino an’Andriamanitra aho, dia vonona ny hampianatra ahy izy!
Raha vonona ny hankato, Andriamanitra dia vonona ny hampiseho ny heriny aminao!
Raha vonona ny hanetry tena ianao, dia vonona Andriamanitra ny hampiasa anao!